Amplero: Szọ Mara Amamihe iji belata Ndị Ahịa | Martech Zone
Mgbe a bịara n'ịbelata iwe ndị ahịa, ihe ọmụma bụ ike ọkachasị ma ọ bụrụ n'ụdị nghọta omume bara ụba. Dị ka ndị ahịa anyị na-eme ihe niile anyị nwere ike ime iji ghọta etu ndị ahịa si akpa agwa na ihe kpatara ha ji apụ, ka anyị nwee ike igbochi ya.
Mana ihe ndị na-ere ahịa na-enwetakarị bụ nkọwa nkọwa kama ịbụ amụma ziri ezi nke ihe egwu. Yabụ kedu ka ị ga - esi bute nsogbu a? Olee otu esi ebu amụma banyere onye nwere ike ịhapụ ka ọ zuo oke ma nwee oge zuru ezu iji tinye aka n'ụzọ ndị na-emetụta omume ha?
Ruo oge ndị ahịa na-agba mbọ idozi nsogbu nke churn, usoro ọdịnala maka imepụta ihe ọkụkụ bụ iji "akara" ndị ahịa. Nsogbu dị na nsị ọnụ bụ na ọtụtụ ụdị njigide na-eme ka ndị ahịa nwee akara nke dabere na iji aka na-ekepụta mkpokọta njirimara na ụlọ nkwakọba ihe data ma nwalee mmetụta ha iji melite mbuli nke ụdị ngwa ngwa. Usoro a nwere ike iwe ọtụtụ ọnwa, site na ịtụle omume ndị ahịa site na itinye usoro ịzụ ahịa njigide. Ọzọkwa, ebe ọ bụ na ndị na-ere ahịa na-ewelite ọnụọgụ ndị ahịa kwa ọnwa, a na-atụ uche ngwa ngwa na-egosi na onye ahịa nwere ike ịhapụ. N'ihi nke a, usoro ịzụ ahịa njigide na-egbu oge.
Amelọ, nke mere na nso nso a mara ọkwa mwekota nke ụzọ ọhụụ maka ịme ngosipụta omume iji mee ka ọ bụrụ mmụta nke igwe ya, na-enye ndị na-ere ahịa ụzọ mara mma iji kwuo na igbochi ọnya.
Mmụta igwe bụ ụdị ọgụgụ isi (AI) nke na-enye sistemụ ikike iji mụta ihe na-enweghị mmemme doro anya. A na - emezu nke a site na ị na - enye data oge niile yana ịnwe algọridim na - agbanwe agbanwe dabere na nsonaazụ.
N'adịghị ka usoro ihe eji eme ọfụma oge ochie, Amplero na-enyocha usoro nke omume ndị ahịa na ndabere dị ike, na-achọpụta na omume ndị ahịa bara uru. Nke a pụtara na onye na-ere ahịa anaghịzị ịdabere n'otu akara akara kwa ọnwa na-egosi ma onye ahịa ọ nọ n'ihe ize ndụ ịhapụ ụlọ ọrụ ahụ. Kama nke ahụ, a na-enyocha omume dị egwu nke onye ọ bụla na-azụ ahịa na-aga n'ihu, na-eduga n'inwekwu oge ijide ahịa.
Isi uru nke usoro ihe nlere omume nke Amplero:
Enwekwu ezi. Ihe nlere nke Amplero na-adabere n'inyocha akparamàgwà ndị ahịa n'oge na-aga, ya mere ọ nwere ike ịchọpụta mgbanwe abụọ aghụghọ na omume ndị ahịa, ma ghọta mmetụta nke ihe na-adịghị adịkarị. Amdị Amplero dịkwa iche na a na-emelite ya oge niile dị ka data omume ọhụrụ dị. N'ihi na ọnụọgụ akara anaghị agbapụta agba, enweghị ndapụ na arụmọrụ karịa oge.
Amụma vs. reactive. Na Amplero, ihe nlere na-aga n'ihu na-eleba anya na ike ịkọ ọtụtụ izu tupu oge eruo. Ikike a nke ịkọ amụma karịa ogologo oge na-enye ndị na-ere ahịa ohere itinye aka na ndị ahịa ka na-emekọrịta ihe mana ha nwere ike ịda mbà n'ọdịnihu site na ozi njigide na onyinye tupu ha erute isi nke nloghachi ma pụọ.
Nchọpụta akpaaka nke akara ngosi. Amplero na - achọpụta akara ngosi na - enweghị isi na - enweghị isi na - adabere na nyocha usoro omume onye ahịa na oge. Exploga n'ihu na-enyocha data na-enye ohere maka nchọpụta nke ahaziri iche na ịzụrụ, oriri, na akara aka ndị ọzọ. Ọ bụrụ na enwere mgbanwe na ahịa asọmpi nke na-akpata mgbanwe n'omume ndị ahịa, ihe nlereanya Amplero ga-agbanwe ozugbo na mgbanwe ndị a, na-achọpụta usoro ọhụụ.
Nchọpụta Oge, mgbe ahia ka bara uru. Ebe ọ bụ na ihe nlere nke usoro Amplero na-eme ka data ntinye data dị ukwuu, ọ dị obere oge ka achọrọ iji merie onye ahịa nke ọma, nke pụtara na ihe nlele Amplero nwere ike ịchọpụta ndị ọkụ na obere oge. A na - enweta nsonaazụ nke usoro ịme ihe mgbe niile n'ime ikpo okwu ịzụ ahịa nke Amplero nke na-achọpụta ma na-eme ihe kacha mma maka ire ahịa maka ndị ahịa ọ bụla na gburugburu ya.
Na Amplero marketers nwere ike nweta 300% mma churn amụma ziri ezi na ruo 400% mma njigide ahịa karịa mgbe eji omenala ịme ngosi uwe usoro. Inwe ikike ịme amụma ndị ahịa na-ezi ezi na nke oge na-eme ka ndịiche dị iche iche nwee ike ịzụlite ikike na-adigide iji belata mbibi na ịkwalite ọnụ ahịa ndị ahịa n'oge ndụ.
Maka ama ndị ọzọ ma ọ bụ ịrịọ ngosi, biko gaa na Amelọ.
Tags: zuru okeNjikọ ụwangwa igwekeonweezubere icheiwu ezubere iche